के गर्ने त सफल बन्न ? - ज्ञानविज्ञान
दिमागलाई स्वस्थ राख्नका लागि आफूसँग रहेका सामान्य अस्वस्थ व्यवहार पन्छाउनुपर्छ । आफ्नो व्यवहार, भावना र विचार नियन्त्रण गर्न सकियो भने सफलता नजिकिँदै जान्छ । जीवनमा उतारचढाव आइरहन्छ । जसको दिमाग स्वस्थ हुन्छ, उसले यस्ता उतारचढावलाई सहजै स्वीकार्छ ।
सफल बन्न अपनाउनुहोस् यी ६ कुराहरु :
१. गल्ती महसुस गर्ने, तनाव नलिने
२. अर्काको नजरबाट आफूलाई नहेर्ने
३. परिवर्तनसँग नडराउने
४. एक्लोपन महसुस नगर्ने
५. अर्काको सफलतामा रमाउने
६. अरुसँग तुलना नगर्ने
Topics #बन्न #सफल
Don't Miss it अपनाउनुहाेस् यी उपाय स्वस्थ र अाकर्षक बन्न
Up Next मर्निङ वाकमा जाँदा ध्यान दिनुपर्ने यी १२ कुराहरु
ज्योतिषअनुसार, हीरा लगाउदा यो कुरामा ध्यान दिनुस्, नत्र हुनेछ नोक्सानी
ज्योतिषअनुसार, हीरा शुक्र ग्रहसँग सम्बन्धित रत्न हो । हीराको शुभ फलले व्यक्तिलाई सुखसमृद्धि र धनलाभ हुन्छ । यसको अशुभ असरले…